Isiphoso soMbane oPholileyo ophaya ngeAromatherapy China Manufacturer
Inkcazo:Ubunzima beAromatherapy,Miff Diffuser opholileyo,Isitshisi soMbane esityhidiweyo
Home > Imveliso > Ultrasonic Diffuser > Isiphoso soMbane oPholileyo ophaya ngeAromatherapy
Isiphoso soMbane oPholileyo ophaya ngeAromatherapy
Umzekelo No.: DT-1623
Umbala o-7 wokukhanya okuKhanyisiweyo kunye nolungiselelo lweTimer: Cofa iqhosha le-MIST ukukhetha imowudi ye-1H / 3H / eqhubekayo. Cinezela iqhosha LOKUGQIBELA ukufumana ukukhanya kwe-7 cyclic light okanye ukulungisa ukukhanya kombala omnye (kukhanye / kufiphale). Ukukhanya okanye iMpazamo inokusetyenziswa ngokwahlukeneyo, kulula kakhulu kwaye elula.
Izinto ezingenamanzi ezizenzekelayo kunye ne-PP: Isixhobo esincinci esincinci siya kuvala ngokuzenzekelayo xa amanzi ephelelwa. Akukhoxhala malunga nokonakalisa isixhobo ngokwaso okanye ukubangela ingozi kubasebenzisi. Yenziwe ngezinto ze-PP, le nguqulelo ye-ultrasonic ayinabungozi kwaye ikhuselekile kwiintsana.
IziBonelelo eziNgcono kwi-Diffuser yasekhaya: Ukuyisebenzisa njenge-humidifier epholileyo ye-ultrasonic (ngaphandle kweoyile eziyimfuneko) kunokongeza umswakama ngakumbi kulusu lwethu olomileyo kunye nemilebe etyhidiweyo. Ukukhanya kwemibala emi-7 kuyenza ibe kukukhanya kwelanga ebusuku ukusikhapha ukuba silale kamnandi ebusuku. I-Dituo ultrasonic aroma diffusers ivelisa phantse akukho ngxolo, ukukhulula ixhala lethu malunga nokuphazamisa ukulala kwethu, ukufundisisa okanye umsebenzi.
Ubomi obumnandi kwisitayela se-Zen: Ngokujonga kweenkozo zendalo iinkuni, iinkozo zeenkuni ezonakalisayo zakha isitayela esimnandi nesilula seZen décor eofisini nasekhaya, zizisa ukuphumla kunye nokuzola kubomi bakho, ukudala umphunga opholileyo wokupholisa umoya ojikeleze umoya , ilungile yokufuma kwesikhumba.
Imifanekiso ye-Ultrasonic efunekayo kwi-Diffuser ye-oyile:
UkuSebenza kweDiski yoMatshini oSingaPhezulu:
Indawo yokufaka isicelo seDrafuser:
I-500ml ye-Ultrasonic Aroma Diffuser i-220v yoKhuseleko oluThuleyo Qhagamshelana Ngoku
Ukuthengiswa kweshushu kweyona Ndawo yeUltrasonic ebaluleke kakhulu kwi-Diffuser ye-2019 Qhagamshelana Ngoku
Ubunzima beAromatherapy Miff Diffuser opholileyo Isitshisi soMbane esityhidiweyo